कहिकतै चुनौति भएपनि स्थानियको सहयोग पाएका छौ–तामाकोशी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोईरला | तामाकोसी एफ.एम ९५ मेगाहर्ज
Home Uncategorized कहिकतै चुनौति भएपनि स्थानियको सहयोग पाएका छौ–तामाकोशी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोईरला
कहिकतै चुनौति भएपनि स्थानियको सहयोग पाएका छौ–तामाकोशी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोईरला
समसामहिक विषयमा गरिएको कुराकानि ।
तामाकोशी गाउँपालिकाले बाहिरबाट आउने माहानुभावको तथ्यङ्क राखेको छ ?
राखेको छ । हामीले पहिलो चरणमा आउने र दास्रो चरणमा पालिका भित्र आउने सम्पुर्ण माहानुभावको तथ्यङ्क राख्ने काम गरेका छौ । सरकारले जारि गरेको बन्दाबन्दि पछि पालिका भित्र चालिस जना जति मानिस आउनु भयो । दास्रो चरणमा तेस्रो मुलुक , छिमेकिमुलुक भारत र नेपालको अन्य क्षेत्रमा बसोबासगर्ने २१ जना मानिस आउनु भएको छ । पहिलो चरणमा आएका सम्पुर्णको आरडिटि परिक्षण गरियो भने अहिले २१ जना मानिसहरु आएर पालिका भित्रका विभिन्न क्वरेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ।
पछिल्लो अवधिमा आएका महानुभावको लागि स्वास्थ्य परिक्षण के हुदै छ ?
अहिले उहाँहरु जहाँबाट आउनु भएको थियो त्यहाँपनि परिक्षणा गरिएको छ । हामीले पनि किर्ने धुलिखेल हस्पिटलमार्फत परिक्षण गराएर क्वरेन्टाइनमा राखेका छौ । अव १४ दिन पछि कुन परिक्षण गर्ने पालिकाले निर्णय गरेपछि परिक्षण गछौ अनि त्यसपछि आ आफ्नो घर पठाउँ छौ ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा उहाँहरु क्वरेन्टाइनमा कसरि बस्नु भएको छ ? सहज छ उहाँहरुलाई ?
तामाकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्था गरेको छ । हाल स्कूलमा क्वरेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौ । उहाँहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ । घर नजिक हुनेहरुले आफ्नै घरबाट खानाल्याएर खाने व्यवस्था बनाइएको छ । हामी तोकिए बमोजिम पैसा दिन्छौ भनेका छौ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा क्वरेन्टाइनको व्यवस्था पालिकाको क्षमता अनुसारको गरेका छौ ।
तामाकोशी गाउँपालिका भित्रका स्थानिय बासिन्दाको स्वास्थ्यलाई कसरि ध्यान दिइएको छ ?
तामाकोशी गाउँपालिका स्थानिय बासिन्दाको स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान दिइरहेको छ । पालिका भित्रका स्वास्थ्य चौकिहरुलाई नियमित संचालनमा राखिएको छ । पालिकाले नेपाल सरकारले प्रधान गर्ने निशुल्क औषधि कुनै पनि संस्थामा आभाव हुन दिएको छैन । यो माहामारिको अवस्थामा पनि हामिले दिर्गरोगि विरामिको लागि औषधि वितरण गरेका छौ । नियमित औषधि सेवन गर्ने मानिसको लागि औषधि अभाव हन दिएका छैनौं । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा आकष्मिक कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोरोना भाइरसमा पनि हामिले बाहिरबाट आउने मानिसको आरडिटि परिक्षण गरेका छौ । उहाँहरुको सवैको नेगेटिभ आएको छ । यो पालिका र जिल्लाको निम्ति खुशिको कुरापनि हो । अहिले पछिल्लो समयमा बाहिरबाट आएका मानिसको लागि क्वरेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौ । रोग समुदायमा नफैलियोस भन्नका लागि हो । तामाकोशी गाउँपालिका पालिका भित्रका वासिन्दाको स्वास्थ्यमा एक दम सम्वेदनशिल छ । पालिकाले गर्ने काममा कुनैपनिे बाँकि राखेका छैनौं । यो अहिलेको परिस्थितिलाई पनि पालिका रोकथामको लागि दिन रात लागि रहेका छौ । जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मि अहोरात्र खटिरहेका छौ । अव आउन सक्ने जोखिमलाई पनि ध्यान दिदै काम गरिरहेका छौ ।
बाहिरबाट आउने माहानुभावलाई स्थानियको हेर्ने दृष्टिकोण के पाउनु भयो ?
केहिठाउँमा समस्या देखिरएको छ । धेरै जसो ठाउँमा ठिकै छ । जस्तो झुलेको क्वरेन्टाइनकोबारेमा अलिकक्ति नकरात्मक कुराहरु वाहिर आयो । हामीले त्यहाँको स्कूलमा राख्न खोजेका थियौ स्थानियको विरोधका कारण हामीले त्यहिका जनप्रतिनिधिको घरमा क्वरेन्टाइन बनाएर राखेका छौ । यदि स्थानियले यसरि नै समस्या देखाउने हो भने चुनौति आउने देखिन्छ । स्थानिय आफ्ना दाजुभाइ आउनु भयो भनेर उहाँहरुको मनोवल बढाउनु पर्छ अनि सहयोग गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा हामिलाई पनि सजिलो हुन्छ । रोग फैलनबाट पनि जोगिन्छ । स्थानियले सहयोग नगर्ने हो भने रोग फैलने जोखिम हुनको साथै हामिलाई काम गर्न पनि समस्या हुन्छ । बाहिरबाट आउने माहानुभावको पनि मनमा ठेस पुग्छ यसैले हामि सवैमिलेर कोरोना भाइरसको लडाइ लड्नु पर्ने अवस्था छ । मानविय समवेदनालाई ख्याल गर्दै स्थानिय, स्थानिय सरकार, लागाएत सवैको हातेमालो जरुरि छ ।
अन्तमा यस परिस्थितिबाट बच्न कस्ले के गर्नु पर्ला ?
सवैले सर्तक बनौं । राज्याले तोकेको नियम पालना गरौ ।
Previous articleबाजुराकी दुई वर्षीया बालिकाको कोरोनाकै कारण मृत्यु, आमा पनि संक्रमित ,आजै १६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleशिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहेका दोलखाका कारोना संक्रमितको ब्यक्तिको मृत्यु
तामाकोशी गाँउपालिकाले अपाङ्गता भएका नागरिकको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, परिचयपत्र वितरण तथा नविकरण गर्ने कार्यक्रम सुरु
तामाकोशी गाउँपालिकाले कर्मचारीको स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम
तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मालुमा पाँच सैयाको अस्पताल संचालन हुने
तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्वर १ भिरकोटका वडा अध्यक्ष महेश्वर काफ्लेको आर्थिक सहयोगमा वडा नम्वर ७ हावाँमा ज्याकेट वितरण
अपाङगता भएका नागरिकको सारथी तामाकोशी गाउँपालिका
शंखेश्वर जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा पुन: रुद्र प्रसाद चौलागाई
तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मालुमा ११ जनालाई फुडपोइजन
tamakoshi_admin - August 30, 2020
दिपक बस्नेत,भाद्र १४, तामाकोशी। दोेलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मालुमा ११ जनालाई फुडपोइजन भएको छ । तीन जनालाई...
मेलुङ गाउँपालिकामा १२ जना सहित दोलखा जिल्लाको विभिन्न ठाँउमा गरि आज मात्र २८ जना लाई कोरोना पुष्टि ।
tamakoshi_admin - November 8, 2020
दिपक बस्नेत कात्तिक २३, तामाकोशी । दोलखामा आज एकैदिन २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ...
tamakoshi_admin - June 1, 2020
समसामहिक विषयमा गरिएको कुराकानि । तामाकोशी गाउँपालिकाले बाहिरबाट आउने माहानुभावको तथ्यङ्क...
© 2020 TAMAKOSHI FM 95 Megaherz